Brighton Oo Ka Jawaabtay Wararka Sheegaya In Arsenal Ay Heshiis Kala Gaartay Ben White – Garsoore Sports
Brighton Oo Ka…
Brighton Oo Ka Jawaabtay Wararka Sheegaya In Arsenal Ay Heshiis Kala Gaartay Ben White
Gunners ayaa dooneysa inay tayo kusoo kordhiso xulashooda daafaca xilli ciyaareedka soo aaddan, waxaana ay si adag u riixayaan saxiixa xiddiga Ingiriiska ee Ben White oo 23 jir kaasoo loo arko inuu yahay mid ka mid ah daafacyada da’da yar ee ugu fiican Premier League-ga.
Arsenal ayaa la kulantay labo dalab oo furitaan oo ku aaddan saxiixa xiddigan oo laga soo diiday laakiin Football.London ayaa isbuucaan ayaa soo warisay in Brighton ay aqbashay dalab seddexaad oo 50 milyan ginni ah oo ka yimid kooxda waqooyiga London.
Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay The Argus, Kooxda Brighton ayaa sheegashooyinkaan ku tilmaamtay ‘qashin buuxa’, xilli ay dedaal adag ugu jiraan sidii ay xiddigooda Arsenal uga ilaashan lahaayeen.
Dabcan dad badan waxay is weeydiinayaan qiimaha 50 milyan oo ginni oo ay Arsenal ka gudbisay xiddigan, miyuu u qalmaa? balse qiimahaas ma ahan qiimihiisa saxda ah laakiin waa qiimaha ay haatan kooxda Brighton loo maleeynayo inay xiddigan ku qiimeeyneeyso.
White waa xiddig daafac ah oo heer sarreeya islamarkaana kooxdiisa Brighton bandhigyo cajiib ah usoo bandhigay ololihii tegay . Arsenal ayaa la filayaa inaanay ka quusan saxiixa xiddigan waxaana ay haatan sugayaan in la aqbalo dalabka 50ka milyan oo ginni ee u maqan maadaama Brighton ay ka gaabsatay inay ku jawaabto ‘Haa’ ama ‘Maya’ sida Football.London uu sheegayo, islamarkaana ay keliya beenisay wararkii sheegayay inay aqbaleen dalabkaas.
Koox Premier League-ga Ka Cayaarta Oo Coronavirus La Tacaalaysa